‘विप्लब’ समूहका सर्लाही इन्चार्जलाई प्रहरीले हत्या गरेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२८ श्रावण २०७७, बुधबार ०९:४६ English
‘विप्लब’ समूहका सर्लाही इन्चार्जलाई प्रहरीले हत्या गरेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष
काठमाडौँ, ५ कार्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लब’ समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल कै प्रत्यक्ष निर्देशनमा उनलाई जबर्जस्ति बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएर ९ राउण्ड गोली हानेर मारेको आयोगले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रीले दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति तथा संकलित प्रमाणसमेतबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दार द्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
शव परीक्षणमा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
५ कार्तिक २०७६, मंगलवार १२:३४ मा प्रकाशित